Suhani Mediaक्रिस्टिना गुरूङ - Suhani Media
अमेरिकामा सूचना प्रविधि पढ्न गएकी क्रिस्टिना गुरूङ बिदामा नेपाल आएकी थिइन् । उनले देखिन्– सिक्वेल सिनेमा ‘प्रेम गीत ३’ को नायिकाका लागि अडिसनको विज्ञापन । त्यसले उनलाई आकर्षित ग¥यो । अडिसन दिने २ हजार ७ सय १४ जना आवेदकमा उनको पनि नाम थियो । त्यसबाट जब टप २५ मा छानिइन्, उनको मन ढुक्क भयो । उनलाई लाग्यो, ‘पक्कै म नै छानिन्छु ।’
अध्ययनका लागि अमेरिका जानुअघि उनले नेपाली चलचित्र त्यति हेरेकी थिइनन् । अमेरिका पुगेपछि भने युट्युबमा उपलब्ध सबै नेपाली चलचित्र हेर्न भ्याइन् । चिनो र साइनो चार पटकसम्म दोहो¥याएर हेरिन् । पछिल्लो समयको चलचित्रमा चाहिँ ‘प्रेम गीत’ उनलाई खुब मन परेको थियो । त्यसकै सिक्वेलमा आफूले अभिनय गर्न पाउने कल्पनाले पनि उनी उत्साहित थिइन् ।
त्यसो त, उनी सानी छँदा खेल्ने क्रममा बहिनीलाई हिरो बनाउँथिन्, अनि आफू सल ओढेर हिरोइन हुन्थिन् ।
अनि ‘चाहन्छु म तिमीलाई नै’ भन्दै नाच्थिन् । यसरी हुर्किएकी क्रिस्टिनासँग रगतमै अभिनय रूचि थियो । टेलिसिरियलमा अभिनय गरिसकेकी आमाकी छोरी थिइन् उनी । आफूलाई रूचि भएको क्षेत्रमा लागेर छोरीले प्रगति गरेको देख्ने चाहना थियो आमाको । त्यसैले एसएलसीपछि नै चलचित्रमा आउने प्रयास गरेकी पनि थिइन् । तर अध्ययनलाई अघि बढाउँदै जाँदा अमेरिका पुगिन् । त्यो विरानो ठाउँले उनलाई धेरै सिकायो । त्यहाँ पनि उनले अभिनयको मोहलाई मनमनै हुर्काइन् । भरत नाट्यमको कक्षा लिइन् । त्यसले नै उनलाई २५ जनामध्येबाट पनि उत्कृष्ट बनायो ।
उनी नायिकाको रूपमा छनोट भइन् । त्यसअघि नै उनले केही म्युजिक भिडियोमा अभिनयको अनुभव पनि गरिसकेकी थिइन् । उनलाई चलचित्रको टिम राम्रो लाग्यो । दर्शकले पनि उनको अभिनय रुचाए । उनी दङ्ग परिन् । दर्शकले रुचाए अभिनयलाई निरन्तरता दिने उनको योजना छ । नृत्यप्रति क्रिस्टिनाका गहिरो रुचि छ, अनि अभिनयमा हरेक किसिमका चरित्रमा देखिने चाहना । चलचित्रका साथमा शास्त्रीय नृत्यमा पनि केही नयाँ गर्ने सोच छ उनको । क्रिस्टिनालाई चलचित्रमा छिरेको सुरूको दिनदेखि अभिनेत्री सुष्मा कार्कीजस्तै देखिन्छिन् भन्ने कमेन्ट सुन्दै आएकी छिन् ।
SUHANI MEDIA & ENTERTAINMENT
www.suhanimedia.com is only entertainment website,closely working entertainment field. it has been in maneuver since 2018,with primary focus on film,music and related activities.it is an online portal that promotes nepali film,filmmakers,actors and music. suhanimedia.com covers all film professionals onawebsite updated daily in nepali language suhanimedia.com is offeringacomprehensive collection of news,articles,songs,pictures,interviews and many more .
every day 6:00 am to 8:00am